Ragga Xaaslayaasha ee u dhashay dalka Kuweyt oo lacago loo ballanqaaday haddii ay guursadaan haweenk
Loading...	Home Wararka Ragga Xaaslayaasha ee u dhashay dalka Kuweyt oo lacago loo ballanqaaday haddii ay guursadaan haweenk
Ragga Xaaslayaasha ee u dhashay dalka Kuweyt oo lacago loo ballanqaaday haddii ay guursadaan haweenk	Monday, 06 September 2010 03:29	Ragga Xaaslayaasha ee u dhashay dalka Kuweyt oo lacago loo ballanqaaday haddii ay guursadaan haweenka ka weyn 40-sano Haweenka Afartan sano jirka iyo kuwa ka da’da weyn ee garoobada ah ama kuwa laga dhintay iyo kuwa aan weligood hore loo guursan ee u dhashay dalka Kuwayt ayaa waxay heleen fursado guur, kadib markii Baarlamaanka dalkaasi uu ansaxiyay go’aan ah in ragga u dhashay dalka Kuwayt ee guursada xaas Labaad gaar ahaan kuwa 40 sano jirka iyo wixii ka sii da’ weyn la siin doono lacag tiradeeda lagu qadaray Shan iyo toban kun oo Doollarka Maraykanka ah.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka dalka Kuweyt oo lagu magacaabo Faisal Al-Duwaisan ayaa Wakaalada Wararka ee Associated Press(AP) u sheegay in qorshahani uu qayb ka yahay hanaan cusub oo ay dowladda dalka Kuweyt ku yaraynayso tirada dumarka aan la guursan oo beryahan dambe tiradoodu aad u soo badatay.
Go’aankan cusub ee uu soo saaray Baarlamaanka dalka Kuwayt ayaa shuruud uga dhigay bixinta lacagta intaasi la eg in la siin doono oo kaliya ninka Kuwaydiga ah ee xaaslaha ah oo guursada gabadh Afartan jir ah oo laga dhintay, ama la furay ama ku gabowday gabarnimada.
Dowladda dalka Kuwayt ayaa hore u meel marisay nidaam kan ka horreeyay oo ay ku balanqaaday in ninka Kuwaytiga ee guursada guurkiisa u horreeya gabar Kuwatt u dhalatay in lagu caawinayo kharashka arooska oo la siinayo lacag gaaraysa Afar Kun oo Diinaar oo u dhiganta 14 kun oo Dollarka Maraykanka ah.
Dumarka laga dhintay ama la furay ayaa la faray in ay sitaan Dokomentiyo caddaynayay in laga dhintay ama la furay, waxaana lagu dhiiri galiyay hay’addaha dhinaca sharciyada guurka qaabilsan ee dalkaasi in ay hubiyaan shuruudaha ku xiran meel marinta nidaankan cusub ee lagula dagaalamayo guur beelka soo wajahay haweenka dalka Kuweyt.
Nidaankan cusub ee dowladda Kuweyt ay go’aamisay ayaa la sheegay inuu si aad uga caraysiiyay dumarka la qabo oo masayr ka muujiyay qorshahan cusub ee keenaya in raggooda Dumar kale la guursadaan, inkastoo aysan waxba ka qaban karin oo amar dowlo aysan ka hor imaan karin.